मोदीले राखिदिए डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक गेब्रेयसको नयाँ नाम - नागरिक रैबार
मोदीले राखिदिए डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक गेब्रेयसको नयाँ नाम
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)का महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससको नयाँ नाम राखिदिएका छन् । भारत भ्रमणमा रहेका बेला मोदीले गेब्रेयससनको नाम ‘तुलसी भाइ’ राखिदिएका हुन् ।
गेब्रेयसस भारत गुजरातको गान्धीनगरमा आयुष निवेश तथा इनोभेसन सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा हाल भारतमा छन् । सोही सम्मेलनलाई भारतका प्रधाननमन्त्री मोदीले पनि सम्बोधन गरे ।
आफ्नो सम्बोधनको क्रममा मोदीले भने, ‘म आज महात्मा गान्धीको यस पवित्र भूमिमा मेरा परमित्रलाई गुजराती हुनुको नाताले तुलसी भाइ नाम राखिदिन्छु ।’ गेब्रेयससले गुजराती नाम राखिदिन आग्रह गरेकाले आफूले यो नाम दिएको मोदीले बताए ।
From the land of Mahatma Gandhi,aGujarati name has been given to my friend, @DrTedros. pic.twitter.com/jxWqZ9Ng6O
आफूसँगको भेटमा डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक गेब्रेयससले आफू सानो छँदा भारतका शिक्षकहरुले पढाएको र आफू यो स्थानसम्म आइपुग्नुमा भारतका शिक्षकहरुको ठूलो भूमिका रहेको बताउने गरेको मोदीले जानकारी दिए ।
भारत भ्रमण पूरा गरी डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक गेब्रेयसस नेतृत्वको टोली नेपालको तीन दिने भ्रमणका लागि आज मध्याह्न काठमाडौं आउँदै छ ।
हुम्लाको मासपुर गाउँबाट मतदान केन्द्र पुग्न १० घण्टा !
न्यूयोर्क टाइम्सले लेख्योः विहारले रक्सीमा प्रतिबन्ध लगाउँदा पिउनेहरु नेपालतिर
काठमाडौं, ९ जेठ । भारतको विहार राज्यमा रक्सीमा प्रतिबन्ध लागेपछि पिउनेहरु नेपालतिर जाने गरेको समाचार रिपोर्ट न्यूयोर्क टाइम्समा प्रकाशित भएको छ । टाइम्सको अनलाइन संस्करणमा समेत प्रकाशित भएको रिपोर्टमा रक्सी पिउन हुल बाँधेर भारतबाट नेपालमा जाने गरेको उल्लेख गरेको छ । नेपालसँग खुल्ला सीमा रहेको भन्दै न्यूयोर्क टाइम्सको रिपोर्टमा दिउँसो नेपालबाट भारतमा सस्तोमा सामान खरिद […]
१३ वर्षका बालकद्वारा एक वर्षकी नाबालिगको हत्या
पछिल्लो समय आपराधिक क्रियाकलापमा बालबालिकाको पनि संलग्नताले चिन्ता र चासो बढाएको छ । यस्तै, भारतको पछिल्लो घटना झट्ट सुन्दा अपत्यारिलो छ तर त्यति नै भयानक पनि । भारतको लखनउको सैरपुर थानाक्षेत्रमा १ वर्षकी नाबालिगको हत्याको मामिलामा प्रहरीले १३ वर्षका बालकलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार १३ वर्षका बालक आफ्नो पिताको अपमानको बदला […]
एजेन्सी । युक्रेनमा रहेको रुसको सम्पत्ति जफत गरिने भएको छ । युक्रेनको सरकारले सो कुरा जनाएको छ । युक्रेनका प्रधानमन्त्री डेनिस समहालले मंगलबार युक्रेनमा रहेको रुसको सम्पत्ति जफत गरिने जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले युक्रेनको मन्त्रिपरिषदले हालैमात्र युक्रेनमा रहेको रुसको सम्पत्ति जफत गर्ने विषयको कानुन बनाएको र सो सम्पत्ति जफत गर्ने अनुमति दिएको बताउनुभयो । […]
श्रीलंकाका राजापाक्षेको घरमा आगजनी, सांसदको हत्या
एजेन्सी, २७ वैशाख । श्रीलंकामा सरकार विरोधी प्रदर्शन हिंसात्मक हुन थालेको छ । चरम आर्थिक संकटका कारण विरोध बढेसँगै प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेले राजीनामा दिएपनि स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको छ । त्यहाँ हिंसा भड्कदा एकजना सांसदको मृत्यु भएको छ । सत्तारुढ दलका सांसद अमराकेर्ती अथुकोरालाको हत्या भएको छ । उनीसहित २ जनाको झडपका क्रममा हत्या भएको […]
अफगानिस्तानमा चरम भोकमरी
काठमाडौं । अफगानिस्तानमा चरम खाद्य सङ्कट देखिएको छ । दुई करोड बीस लाखभन्दा बढी मानिसहरू गम्भीर भोकमरीबाट ग्रस्त छन् । त्यो जनसङ्खया देशको कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हो । करीब ९७ प्रतिशतभन्दा बढी अफगानीहरू खाद्यान्न अभावबाट प्रभावित रहेको पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । गत वर्ष अगस्टमा तालिबानले अफगानिस्तान नियन्त्रणमा लिएपछि जीवनयापन र खाद्यान्नको मूल्य […]
कञ्चनपुरमा माओवादी कार्यकर्ताबाट एमाले कार्यकर्ता कुटिए
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताबाट नेकपा एमालेका कार्यकर्ता कुटिएका छन् । भीमदत्त नगरपालिका–१९ बागफाँटामा एमालेका स्थानीय कार्यकर्ता अञ्जु चौधरी र राजेन्द्रप्रसाद अवस्थी कुटिएका एमालेको कञ्चनपुर जिल्ला कमिटीका उपसचिव कर्णबहादुर चन्दले बताए । उनका अनुसार अञ्जुको टाउको र छातीमा चोट लागेको छ भने अवस्थीको पनि छातीमा चोट लागेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र […]